Owuwe ihe ubi na -aga n'ihu na mpaghara Moscow - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Isi News Akụkọ mpaghara
N'ọhịa mpaghara mpaghara Moscow, ọrụ owuwe ihe ubi nke nnukwu poteto amalitela, ọrụ mgbasa ozi nke Ministry of Agriculture and Food of the Moscow Region na -akọ.
“N'ime ụlọ ọrụ ugbo na ugbo nke mpaghara ime obodo iri nke mpaghara mpaghara Moscow, ha malitere iwepụta nnukwu poteto. Dabere na data arụmọrụ, taa mkpụrụ bụ 222 centners. Akpakọbara ihe karịrị puku tọn 200, ihe ubi karịrị hectare 900, nke bụ 7% nke mpaghara niile, ”Minista ọrụ ugbo na nri Sergei Voskresensky kwuru.
Na mkpokọta, n'afọ a na mpaghara Moscow, a na -akụ poteto na mpaghara ihe dị ka puku hectare 13.
“Onye ndu na nchịkọta nduku bụ Dmitrovsky obodo mepere emepe, onye kacha emepụta ugbo na akwụkwọ nri na poteto na mpaghara. Akụkụ ndị a na -emepụta nduku dịkwa na mpaghara Kolomna, Ozyory, Lukhovitsy na Stupino, "Voskresensky kwuru.
A na-eme atụmatụ imecha owuwe ihe ubi nduku na mpaghara Moscow n'etiti etiti mgbụsị akwụkwọ.
isi: Gọọmentị Mpaghara nke Moscow
Tags: Mpaghara Moscow
Ihe ọkụkụ kachasị ewu ewu. Nsonaazụ ntuli aka n'etiti ndị na -agụ akwụkwọ akụkọ "Potato System"